ए माधव ! यता सुन | स्विसनेपाल
« ” नो वोर्क नो मनि” बाबुराम भट्टराई ले संबिधान सभामा अनुपस्थित भयको दिन को तलब फिर्ता गरे
स्वीटजरल्याण्ड को बर्न मा हुने अन्तररास्ट्रीय श्रमिक दिबस मा सहभागी हुन नेसोफ स्विस को आब्हान »
ए माधव ! यता सुन
प्रचण्ड फेरि आए भने भन्देऊ माधव— लुब्ध श्वानका मुखमा परेको मासुको चोक्टो माग्न तिमीलाई लाज लाग्दैन ?
सरकारमा तिम्रो चरित्र र चर्तिकला हेर्दा तिमी सम्माननीय, माननीय, श्रीमान्, हजुर र तपाईं भनिनलायक रहेनौ । ‘थाहा’ अभियन्ता रूपचन्द्र विष्ट बाँचिरहेका भए तिनले तिमीलाई ‘तँ भाते’ भन्थे । तर, त्यत्रो नैतिक शक्ति, साहस र शौर्य मसँग छैन । त्यसैले, तिमीलाई तिम्रो वास्तविक हैसियतभन्दा एक तह माथि राखेर ‘तिमी’ को भाकामा म तिमीलाई सम्बोधन गर्दै छु
माधव, तिमी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा किर्नोभै टाँस्सिरहेकै छौ । तिम्रो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् जुवाको खाल, भङ्ज्याहाको झुन्ड वा डकैतीको हिसाब नमिलेका डाँकाहरूको बगालतुल्य भएको छ । बैठकमा तिम्रा मन्त्रीहरू तिम्रै साक्षी-रोहबरमा हात हालाहाल गर्न तम्सिन्छन्, अशिष्ट वचनको वर्षा गर्छन् । तिमी मृतवत् मुद्रामा सुन्छौ र ट्वाँ परेर हेर्छौ । तिम्रो कुनै मन्त्री सिडिओलाई कुट्छ, कुनै मन्त्री कर्मचारीको भान्सेलाई लछार्छ, कुनै मन्त्री अनमिनलाई तथानाम भन्छ, कुनै मन्त्री तिम्रो आज्ञालाई लोप्पा ख्वाउँछ । यथार्थमा कुनै पनि मन्त्री तिमीलाई माखोबराबर गन्दैन । तर, तिमी लाचार छौ, आपना मन्त्रीलाई अदपकाइदामा राख्न सक्दैनौ । निकुञ्जमा लोक्ता बटुल्न गएका दलित नारीहरू सैनिक जवानका हातबाट पक्राउ पर्छन्, बलात्कृत हुन्छन् र गोली ठोकिन्छन् । तिम्रो पार्टीकी खुस्केट महिलामन्त्री गोली चलाउँदै आइलाग्ने महिला सिकारीलाई जवानले जवाफी गोली हान्यो भनी सरासर झुठ बोल्छिन् । तिमी सुन्छौ र चुपचाप बस्छौ । तिम्रै पाटीका अर्का झल्ला मन्त्री भारत-पाक द्वन्द्वका कारण जमिम साह मारिए भनी अनर्गल बकबक गर्छन् । तिमी सुन्छौ र निहुरमुन्टी ‘न’ हुन्छौ । छाडा मन्त्रीलाई छिसिक्क छोए तिमीलाई आप\_mनो कुर्सी हल्लिने डर छ । त्यसैले माधव, कुर्सी जोगाउन प्रत्येक मन्त्रीलाई पञ्चखत माफी दिन तिमी अभिशप्त छौ । गए बरु सृष्टिमा पैरो जाओस् तर कुर्सी नजाओस् । तिम्रो अटल, अथक र अविराम चाहना यही छ । त्यसैले त तिमी माकुने हौ । माधव, कठोर तथ्य जे हो, हो त्यो त भनिनै पर्छ । व्यवहार र आचरणको ऐनामा हेर्दा तिम्रो मन्त्रिपरिषद् सत्तालिप्त सन्काहा, गुन्डा, लफंगा र दिमाग खुस्केकाहरूको जम्बोरी हो । र, हो यो उच्छृङ्खलता र अराजकता, लुट र दुराचारको प्रतीक पनि । तिम्रो बेलगाम मन्त्रिपरिषद्को सिको गर्दै चालकहरू सडकहीन सडकमा वाहन गुडाउन थालेका छन्, विद्यार्थीहरू एकाबिहानै डिस्को धाउन थालेका छन्, चिकित्सकहरू आपत्कालीन सेवासमेत बन्द गर्दै छन्, फौजी छाउनीमा जवान मारिँदा छन्, प्रहरी अधिकारीहरू अपराधमा मुछिँदा छन्, को, कुनवेला, कहाँ मारिने हो, केही ठेगान छैन । त्यसैले, आम जनमानसमा तनाब र भय व्याप्त छ । तर माधव, तिमी निश्चिन्त छौ, तिमी मग्नमस्त छौ । मानौँ कुर्सीको नशाले तिमी लठ्ठ छौ, तिमी इन्तु न चिन्तु छौ । सके तिम्रो कुर्सीप्रेमी परिभाषामा यो सार्वत्रिक अराजकता नै लोकतन्त्र, मर्यादा र सुरक्षाको द्योतक हो ।
भन्दै थिएँ माधव, उल्टो फल प्राप्तिमा तिम्रो योगदानको महागाथा पढेर शान्तिलाई बिथोल्न र संविधान नलेख्न तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएकोमा कुनै शंका छैन । प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा विराजमान भई दस महिनायता यो दिशामा तिमीले गर्दै आएको योगदानको बयान गर्न सहश्र जिब्रा भएको शेषनागले पनि के सक्दो हो र, माधव ? सिके लाल भन्छन्— माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गिरिजाबाबुबाट हुनगएको जण्ड त्रुटि हो । आपनो त्रुटि महसुस गरेरै होला, गिरिजाबाबु उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट त्रुटि सच्याउने यत्न गर्दै थिए । तर, काम फत्ते गर्न नपाई उनी बितिहाले । माधव, ज्ञानेन्द्रको छत्रछायामा त्रुटि सच्याउने शास्त्रमा तिमीले विषारद् प्राप्त गरेका छौ । लौ न, गिरिजाबाबुको यो त्रुटि सच्याइदेऊ । धत्, यहाँनेर मेरो चिन्तनमा विचलन हुन गएछ । माफ गर माधव, म तिमीलाई मूल्यप्रणालीको सकारात्मक कोणबाट हेर्न पुगेँछु । कृतघ्नता तिम्रो मूल्यप्रणालीको पि्रय आदर्श हो । समन्वयकारी कलामा तिमी निपुण छौ भन्ने भ्रममा परी प्रचण्डले तिमीलाई क्रेनले उचालेर संविधानसभामा भित्र्याएथे । प्रचण्डका निधारमा लात्तले हानेर तिमीले गुनको पैँचो तिर्‍यौ । मूल्यप्रणालीको उल्टो कोणबाट हेर्दा आखिर कुरा ठीकै त हो । त्यही भ्रममा परेर होला, गिरिजाबाबुले तिमीलाई उचालेर प्रधानमन्त्रीको आसनमा राखिदिए । अब आप\_mनै तरिकाले गुनको पैँचो तिर्न तिमीले दिवंगत गिरिजाबाबुको छविमा कलंकको अजंगको दाग लगाउने त हौला । जसले, जे जानेको छ र जसलाई, जे मन पर्छ, उसले गर्ने त्यही त हो । कोसिस गर, माधव !
माधव, तिमीले वरण गरेको उल्टो मूल्यप्रणालीको गहन अर्थ नबुझी प्रधानमन्त्री पद माग्न कमरेड प्रचण्ड तिमीकहाँ आएछन् । त्यो सुन्दा म कानसम्म मुख च्यातेर हाँसेँ । ती फेरि आए भने भन्देऊ माधव— लुब्ध श्वानका मुखमा परेको मासुको चोक्टो माग्न तिमीलाई लाज लाग्दैन ? यति भन्दा पनि धाउन छाडेनन् भने माधव, तिनलाई चड्कनचिउरा चखाएर पठाइदेऊ । लुब्ध श्वान भनेको लुब्ध श्वानै हो । बरु ज्यान ज्याला, मुखमा परेको मासुको चोक्टो त्यसले अरूलाई दिँदैन । कि कसो माधव ?
माधव, जुन अनिष्ट प्रयोजनका लागि तिमी प्रधानमन्त्री बनाइएका हौ, त्यसमा तिमी औधी सफल छौ । यसैगरी सफलताका सिँढी चढ्दै जाऊ । गद्दी टिकाउन तिमीलाई बोक्ने घटकहरूलाई राज्यकोषको पैसा बाँड । मन्त्रीहरूलाई घुस ख्वाऊ । आसेपासेलाई भोज प्रदान गर । सडकजाम गर्दै शिलान्यास, उद्घाटन, विमोचन, अभिनन्दन, देवदर्शन र राजशीभोजतर्फ लागिराख । हेलिकप्टरमा सयर गर । र, शान्ति र संविधानको व्यर्थको चाहनामाथि तुषारापात गर्दै जाऊ । माधव, आकाश खसोस्, धर्ती फाटोस्, जगत् कोलाहलमा डुबोस्, जेठ १४ सम्म तिमी गद्दी नछाड । उस्तै परे बरु गद्दीमै प्राणत्याग गर । जेठ १४ पछि माधव, तिम्रो मन्त्रिपरिषद्ले थुपारेको आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक दुराचार, अव्यवस्था, असुरक्षा, अराजकता, भाउवृद्धि र सन्त्रासको फोहोर तिमीलाई बोक्नेहरूले आ-आप\_mनो हैसियत र योगदानअनुसार बाँडेर लिनेछन् । खुसीको कुरो माधव, मूल्यप्रणालीको उल्टो कोणबाट मूल्यांकन गरी तिम्रो नाम विश्वकीर्तिमान अंकित हुने गिनिज बुकमा सुवर्ण अक्षरले लेखिनेछ । यो पुनीत कर्ममा हाल गद्दीमा तिमीलाई टिकाएर सत्ताभोग गर्न अखण्ड योगदान गरिरहेका तिम्रा विद्वान् सञ्चारमन्त्रीले पहल गर्नेछन् । तिनको पहललाई म ज्यान दिएर पछ्याउनेछु । र माधव, गिनिजबुक उल्टोबाट पढ्दा विश्वका आजसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये तिम्रो नाउँ नम्बर एकमा हुनेछ । र, तिम्रो अपूर्व पौरखको कारण नेपालको नामले पनि सोही हैसियत प्राप्त गर्नेछ । माधव, यो कीर्तिमानको गौरव प्राप्त गर्न शान्तिलाई थप धक्का देऊ, संविधान लेखनलाई कुल्च । मूल्यप्रणालीको उल्टो कोणमा तिम्रो नाम सदा अजर-अमर रहनेछ । बल गर, माधव !
from: naya patrika dainik
This entry was posted on March 25, 2010 at 1:36 am and is filed under बिभिन्न पत्रपत्रीका.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ए माधव ! यता सुन”
June 23, 2010 at 12:39 pm | Reply
nepal lai aru 50 barsa pachhadi dhakelera itihans banaune haruwa haruko jhund le yo muluk aakrant huda pani hami nepali lai dukhena